Fanontaniana: Hanimba anao ve ny tsingerin'ny Testosterone iray - BikeHike
Hafiriana no sitrana amin'ny tsingerin'ny testosterone?
Mandra-pahoviana no hidiran'ny steroids testosterone?
Hafiriana aho no tokony hiandry eo anelanelan'ny tsingerina?
Inona no mitranga rehefa mijanona tsy mandray testosterone aho?
Manafohy ny fiainanao ve ny TRT?
Rahoviana no fotoana tsara indrindra hanindrona testosterone?
Steroid ve ny testosterone?
Mampalemy anao ve ny ejaculation?
Inona no soa azo avy amin'ny tsy fanaovana masturbate?
Inona no voka-dratsin'ny testosterone be loatra?
Ratsy ve ny pilina testosterone?
Miaina ela kokoa ve ny olona manana testosterone avo?
Tsara ho an'ny lehilahy ve ny maka testosterone?
Firy taona ianao no afaka mijanona amin'ny TRT?
Be dia be ve ny testosterone 1 ml?
Hafiriana vao manomboka miasa ny tifitra testosterone?
Afaka overdose ve ianao amin'ny tifitra testosterone?
Inona no steroid azo antoka indrindra amin'ny fananganana hozatra?
Inona no steroid mahery indrindra?
Inona no steroid tsara indrindra ho an'ny faobe?
Afaka manindrona testosterone amin'ny baolinao ve ianao?
Azo antoka ve ny testosterone boosters?
Saika ny lehilahy rehetra dia niverina ho ara-dalàna ny tahan'ny testosterone telo volana aorian'ny fiafaran'ny tsingerina, ary 100% amin'ny volana 12, raha toa ka manana fiasa ara-dalàna amin'ny fiandohan'ny fianarana izy ireo.
Vokatra. Ny fiantraikany amin'ny fahalianana ara-pananahana dia miseho aorian'ny herinandro 3 mipetaka amin'ny herinandro 6, ary tsy misy fisondrotana fanampiny andrasana mihoatra. Ny fiovan'ny fananganana / ejaculation dia mety mitaky hatramin'ny 6 volana. Ny fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fiainana dia miseho ao anatin'ny 3-4 herinandro, fa ny tombony ambony indrindra dia maharitra kokoa.
Ny elanelana eo anelanelan'ny tsingerina dia midika hoe miandry 4 ka hatramin'ny 6 herinandro eo ho eo aorian'ny famindrana embryon sy ny fitsapana ratsy momba ny fitondrana vohoka vao manomboka tsingerina feno ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy. Ny fanaovana izany imbetsaka misesy dia antsoina hoe miverina amin'ny tsingerin'ny IVF. Rehefa misaraka lavitra ny tsingerina, dia azo antsoina hoe tara izy ireo.
Raha nampiasa testosterone be loatra ianao, ny fampiatoana ny fanafody dia mety hiteraka soritr'aretina tsy mahafinaritra, toy ny fahaketrahana, ny havizanana, ny fahasosorana, ny tsy fahampian-tsakafo, ny olana amin'ny torimaso, na ny fihenan'ny libido.
Ny olana momba ny aretim-po mifandraika amin'ny TRT dia nohazavaina tamin'ny fanadihadiana vao haingana izay mampiseho fa ny fitsaboana mifandraika amin'ny fitomboan'ny haavon'ny testosterone amin'ny serum amin'ny faritra ara-dalàna dia mifandray amin'ny fihenan'ny fahafatesan'ny rehetra.
Amin'ny fomba mahazatra, dia ny maraina. Tsy ilaina ara-tsiansa ny manindrona testosterone amin'ny maraina, na dia eo amin'ny ambaratonga ambony indrindra aza ny testosterone antsika amin'ny maraina.
Steroid anabolika Ny hormone steroid anabolika lehibe novokarin'ny vatanao dia testosterone. Ny testosterone dia manana fiantraikany lehibe roa amin'ny vatanao: Ny vokatra anabolika dia mampiroborobo ny fananganana hozatra. Ny fiantraikan'ny androgenic dia tompon'andraikitra amin'ny toetran'ny lehilahy, toy ny volo amin'ny tarehy sy ny feo lalina kokoa.
Mahatonga fahalemena ve ny masturbation? TSIA, tsy miteraka fahalemena ny masturbation. Ny hormone prolactine dia avoaka mandritra ny masturbation ary araka ny fanadihadiana dia mety hisy fiantraikany amin'ny torimaso ny prolactin, ka mahatonga anao ho reraka sy rendremana. Ny zava-misy mahafinaritra dia maro ny olona manao masturbate mba hanampiana azy ireo hatory sy hanamaivana ny adin-tsaina.
Mety hampitombo testosterone sy hanatsara ny kalitaon'ny tsirinaina ny fifadiana ejaculation mandritra ny andro vitsivitsy. Na izany aza, tsy misy fikarohana natao hanohanana ireo filazana hafa mifandraika amin'ny tsy fanaovana masturbate. Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia manaiky fa ny masturbation dia ampahany ara-pahasalamana sy manan-danja amin'ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo mahazatra.
Ny lehilahy manana haavon'ny testosterone avo dia mety hiaina: akne. fihetsika mahery setra na mampidi-doza. volo vatana tafahoatra. aretin'andoha. aretim-po na aty. fiakaran'ny tosidrà (hypertension) avo firaisana ara-nofo (libido) nitombo ny fahazotoan-komana.
WEDNESDAY, Oct. 26, 2016 (HealthDay News) - Ny testosterone fanampiny sy ny steroid anabolic-androgenic (AAS) mifandraika dia mety miteraka aretim-po, fiovan'ny toetran'ny olona ary tsy fahampian-tsakafo, ary mora ampiasaina, ny US Food and Drug Administration dia mampitandrina.
Nilaza izy fa ny haavon'ny testosterone avo kokoa dia mifandray amin'ny faharetana bebe kokoa ary ny olona miaina ela kokoa dia manana haavon'ny hormone tsara kokoa.
Ny testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny hozatra. Manampy amin'ny fifehezana ny lanja sy mampitombo hery ny faobe vatana. Ho an'ny lehilahy manana testosterone ambany, ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fitsaboana dia mety hampihena ny tavy matavy ary hampitombo ny haben'ny hozatra sy ny hery.
Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana testosterone dia fitsaboana mitohy izay mitohy mandritra ny fotoana maharitra, raha tsy amin'ny fotoana tsy voafetra. Tahaka ny amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra mitaiza, ny fampitsaharana ny fitsaboana dia mety hahita ny soritr'aretinao miverina rehefa mihena ny haavon'ny testosteron indray mandeha indray.
1 ml isan-kerinandro dia 200 mg isan-kerinandro ny testosterone. Izany dia fatra fanoloana tsy hita fa mampitombo be ny matavy be ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, ny fampiasana fatra avo kokoa dia mety hampitombo ny famokarana sela mena sy ny hamafin'ny ra, noho izany dia mila manara-maso ny haavon'ny hematocrit anao ny dokotera.
Rahoviana no manomboka miasa ny fitsaboana amin'ny testosterone ambany? Ho an'ny lehilahy izay nomena fitsaboana fanoloana testosterone, matetika dia maharitra telo na enim-bolana ny miasa, hoy i Farooq. “Mety hahita fivoarana haingana kokoa ny lehilahy sasany, fa ho an'ny ankamaroan'ny lehilahy dia dingana tsikelikely izany,” hoy i Farooq.
Antsoy amin'ny dokotera ny torolalana raha tsy mahita fotoana hanaovana tsindrona testosterone ianao. Koa satria io fanafody io dia omen'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana amin'ny toeram-pitsaboana, dia tsy azo inoana ny hitrangan'ny overdose.
Testogen dia tena booster testosterone, ary misy fitambarana akora mahery vaika, ka mahatonga azy ho safidy tonga lafatra, voajanahary ary azo antoka amin'ny steroïde. Ny steroid anabolika tena izy amin'ny ankapobeny dia karazana testosterone samihafa, noho izany dia misy dikany fa ny booster testosterone dia hanampy anao hanangana hozatra.
Misy karazany 100 mahery amin'ny steroids anabolika. Ny androgen mahery indrindra dia testosterone (voatonona: tess-TOSS-tuh-rone). Na dia hormonina lahy matotra indrindra aza ny testosterone, dia mamokatra kely kokoa ny vatan'ny vehivavy.
Trenbolone sy Dianabol; Dianabol no steroid safidy ho an'ny olona izay mitady hanorina hozatra lehibe ao anatin'ny fotoana fohy. Ity steroid ity dia voamarika amin'ny heriny, ary ny fampidirana azy amin'ny stack miaraka amin'ny testosterone dia hanatsara ny tsingerinao.
Rehefa voatendry amin'ny endrika crème miaraka amin'ny fitambarana fototra mety, dia azo ampiharina amin'ny scrotum ny testosterone transdermal. Ny hoditry ny scrotal dia manify ary manana steroïde permeability ambony. Tena zava-dehibe ny misoroka ny fampiasana crème na gel misy alikaola satria manimba ny fahasalaman'ny scrotal ny alikaola.
Azo antoka ve ny fanampin-tsakafo testosterone? Ny sasany amin'ireo OTC testosterone boosters dia mety ho azo antoka rehefa ampiasaina amin'ny antonony, saingy tsy afaka mampiakatra na mitazona ny haavon'ny testosterone. Ny endrika rehetra amin'ny OTC testosterone boosters dia manolotra ny risika ara-pahasalamany manokana.
Fanontaniana: Hafiriana ny tsingerin'ny Testosterone
Ahoana ny fomba hanodinana ny Testosterone
Fanontaniana: Inona ny Testosterone ambany
Inona no mampihena ny Testosterone
Ny tsingerin'ny fiainan'ny voangory volana Mey
Valiny haingana: Afaka miala amin'ny Testosterone ve ianao
Fanontaniana: Ahoana no fanaovanao tsingerin'ny Testosterone
Valiny haingana: May Bike
Fanontaniana: Inona no sakafo mampihena ny testosterone
Valiny haingana: Inona no sakafo mampihena ny testosterone